Na-ejegharị Ememme-News Center-NINGBO SUNSOUL UTgbọala ngwa mma CO., LTD
Oge: 2021-02-26 Hits: 19
Thebọchị nke iri na ise nke ọnwa mbụ bụ Ememme Lantern, ememme ahụ zigara ọtụtụ ọ joyụ, achọrọ m ka ị nwee obi ụtọ n'ezinụlọ, ọtụtụ ịhụnanya na-atọ ụtọ ma nwee ọ ,ụ, ọrụ na-ewe nnukwu ego, obi ụtọ dị ukwuu ndu, jisie ike ọtụtụ ezi ihe!
Ememe oriọna a enweghi oke. Ọ bụ akara aka ịmata ibe ha.Abalị na-enwu Kyushu snow, na-ekpe ekpere maka ọnwa zuru ezu.Naanị okwu siri ike ịme mmiri na ọdọ mmiri niile, ọ bụghị ngọzi niile na-agbanye eriri asaa.Kechioma ememme mgbe nwere, obi ụtọ na dum afọ.Obi ụtọ yuanxiao!
Zitere gị nnukwu efere nke foto ezinụlọ, obi ụtọ, ụtọ, obi ụtọ, ọdịmma, akụnụba, ọbụbụenyi, ahụike, udo, ntụsara ahụ, ihe ịga nke ọma.Obi ụtọ na-ejegharị Ememme!
Fifbọchị nke iri na ise nke ọnwa gbara gburugburu, na ezukọ ezi na ụlọ na tebụl.Akwụsị dumplings nụrụ ụtọ a nnukwu efere, ụtọ obi ọkụ.Gaa ọzọ na-ele anya, na-enwe obi ụtọ ma kwekọọ na onye ọ bụla na-enwe anyaụfụ.Olu ngọzi na-agbasaghị, ọchị ọchị.M na-achọ obi ụtọ na-ejegharị Ememme!
Otu yuan mgbake ụwa spring, nke iri na ise ụbọchị nke na-ejegharị Festival.Ọnwa na-enwu na mbara igwe nke jupụtara na kpakpando, ọkụ na-enwu gbaa na-eme mmiri.Ọtụtụ puku ọkụ na-abụ abụ Yang, ngwaahịa nlọghachị ngwaahịa, ya ọchị ọchị obi ụtọ, obi ụtọ ụtọ ísì ụtọ na-ese n'elu mmiri.Achọrọ m ka ijikọ ezinụlọ gị nwee obi ụtọ!
Okirikiri ọnwa, na-egosi lanterns, mee ka ọdịnihu dị iche iche na-acha uhie uhie, rie yuanxiao, ngọzi, ndụ ụtọ jisie ike, zipu ozi ederede, ozi ọma, ndị enyi na-ekele ezigbo mmekọrịta, Ememe Ememe, jiri ezi obi chọọ ka ị kacha mma, ọdịnihu na-ekwe nkwa.
Mgbe i richara nri iji mee oriọna, na-efu gị na ịrị elu ngwa ngwa, nwee obi ụtọ na mmiri sitere na ifufe, obi a withụrị na gị na ndụ a, nwee ọ theụ na ọnwa iji zipụ ngọzi, kelee gị onye kachasị elekwasị anya, nwee obi ụtọ ịdabere na Optimus Prime, jisie ike na ndụ gị dị jụụ.M na-achọ gị obi ụtọ na-ejegharị Festival.
Otu okpokoro agba gburugburu, ezinụlọ na-achị ọchị;Nri abalị, nri na-atọ ụtọ karịa ememme;Iko mmanya, juputara na onu na onu;Ngọzi, na-achọ ka ị baa ụba na ngọzi karịa.Na-ejegharị Ememme, na-achọ ka ezinụlọ gị nwee obi ụtọ!
Ọkụ ọbụna kpakpando nghọta, ezimezi oku n'akụkụ osisi ahụ.Lovehụnanya na gburugburu nri ọbọp, na-achị ọchị site na agba na ihuenyo.Igwe ụlọ na-anụ ụda achara, ọnwa atọ ọzọ daa piom.N'ịgba mbọ maka oge opupu ihe ubi dị ka o kwere mee, eze ukwu gbara ume ugboro ugboro.Na-ejegharị na-eme ememme M na-achọ gị ezi ahụ ike, ezinụlọ reunion!
Ememe Oriọna iji nwee ọ lanụ oriọna, kpakpando na-enye gị obi ụtọ, Ememe Mbara ala iji nwee ọ lanụ ọkụ, osisi obi ụtọ maka gị, ụbọchị nke iri na ise nke ọnwa mbụ iji rie nsị, chi bọọ na-atọ gị ụtọ, ụbọchị iri na ise nke ọnwa mbụ iri nri. ebu, nrọ nke ọnwa maka gị.Obi ụtọ yuanxiao!
Previous: Ebee ka taya ụgbọ ala ochie na-aga mgbe ị gbanwere ya?
Ọzọ: Oge Ememe Ememe